China Nickel Chrome Resistance Alloys Kugadzira uye Fekitori | TANKII
Nichrome, inozivikanwawo sekuti nickel chrome, chiwanikwa chinogadzirwa nekusanganisa nickel, chromium uye, pano neapo, iron. Inonyanya kuzivikanwa nekupisa kwayo kupisa, pamwe nekupokana kwayo neiriwo uye oxidation, iyo alloy inobatsira zvisingaite kune akati wandei ekushandisa. Kubva mukugadzira kwemaindasitiri kuenda kubasa rekutandara, nichrome muchimiro chetambo inowanikwa mune akasiyana zvigadzirwa zvekutengesa, hunyanzvi uye maturusi. Iyo zvakare inowana kunyorera mune akasarudzika marongero.
Nichrome waya isimbi yakagadzirwa kubva kunickel uye chromium. Iyo inodzivisa kupisa uye oxidation uye inoshanda sechinhu chinopisa muzvigadzirwa senge toasters uye bvudzi dryers. Hobbyists vanoshandisa nichrome waya mu ceramic zvivezwa uye kugadzira girazi. Iyo waya inogona zvakare kuwanikwa mumarabhoritari, kuvaka uye akasarudzika emagetsi.
Nekuti nichrome waya haigadzikane nemagetsi, inobatsira zvisingaite sechinhu chinopisa muzvigadzirwa zvemabhizimusi uye maturusi epamba. Toaster uye vhudzi rinoomesa bvudzi vanoshandisa macils eiyo nichrome waya kugadzira yakawanda kupisa, sezvinoita hovhoni dzekushambidza uye yekuchengetera hita. Maindasitiri maficha anoshandisa nichrome waya kuti ishande. Kureba kwetichrome tambo kunogona zvakare kushandiswa kugadzira inopisa waya cutter, iyo inogona kushandiswa kungave kumba kana munzvimbo yeindasitiri yekucheka uye kuumba mamwe mafuru nemapurasitiki.
Nichrome waya inogadzirwa neisina-magineti alloy anonyorwa anonyanya nickel, chromium, uye iron. Nichrome inoratidzirwa neayo epamusoro ekudzivirira uye yakanaka oxidation kuramba. Nichrome waya zvakare ine yakanaka ductility mushure mekushandisa uye yakanakisa weldability.
Iyo nhamba inouya mushure meNichrome waya mhando inoratidza huwandu hwenickel mune chiwanikwa. Semuenzaniso, "Nichrome 60" ine angangoita 60% Nickel mukuumbwa kwayo.
Zvikumbiro zveNichrome waya zvinosanganisira kupisa zvinhu zvevhudzi rinoomesa, zvinopisa kupisa, uye rutsigiro rweceramic mumakirn.
Max Kuenderera mberi
Kupisa (° C)
Pashure: Yemhando Kuongorora kwePfuti dzeMhepo - Mhangura Nickel Alloy Wire - TANKII
Zvadaro: Iron Chrome Aluminium Resistance Alloys
Nickel chiwanikwa 120
Nickel chiwanikwa 180
Nickel chiwanikwa 200
Nickel chiwanikwa 201
Nickel chiwanikwa 205
Nickel chiwanikwa 270
Nickel chiwanikwa 30
Nickel chiwanikwa 60
Nickel chiwanikwa 90
Kuayina Machines, Nickle Chrome Alloy Wire, Sayenzi Kunyorera, Ion Nitriding, Ribbon Alloy Bayonets, Nichrome,